Boeing 737 Max 8: Daandiin Xiyyaaraa Noorweey sababii Max 737 tiin imala dhaabuuf - BBC News Afaan Oromoo
Boeing 737 Max 8: Daandiin Xiyyaaraa Noorweey sababii Max 737 tiin imala dhaabuuf
14 Hagayya 2019
Daandiin qilleensaa Norweey gatii gadaanaan imaltoota deddeebisu - Daandiin Xiyyaaraa Noorweey baatii dhufurraa kaasee balaliinsa Ayerlaandiifi US jidduu akka dhaabu beeksiiseera - kanaafis Boeing Max 737 hojiirraa dhaabamuu komataniiru.
''Sararri balaliinsaa kunneenis kana booda daldalaaf kan hinbaafne ta'u adda baafneerra,'' jedhu.
Daandiin Xiyyaaraa Noorweey kan bu'aa galmeessuuf yaalaa turte, murteen baatiiwwan darbee MAX 737 akka hojiirraa dhaabbatan taasifamee xiyyarichi bu'a qabeessummaa miidhuu himu.
Kana malees daandiiwwan qilleensaa Dubliin, Korke fi Shaanoon irraa gara US fi Kaanaadaa imalam jahas Fulbaana 15 dhaabachu danda'u.
Xiyyaariwwan Boeing MaX 737 erga balaan xiyyaarota lama irra qaqabeen booda akka dhaabbatan taasifamunsaanii ni yaadatama. Kunis balaa daandii qilleensaa Lion Air flight bara darbe galaana Jakartaa keessatti kufee fi daandii qilleensa Itoobiyaa baatii Bitooteessaa bufata Finfinneeraa akkuma ka'een daqiiqawwan muraasa keessatti kufuun cacabeen turan.
Balaawwan lamaan kanneeniinis lubbuun namoota 346 darbeera.
''Bitooteessaan asii imalawwan Irlaandiifi Kaaba Amerikaa jiddu jiruun maamiltoonni keenya akka hinmiidhamneef jecha xiyyaarawwan kireeffachuun yaalii cimaa taasisaa turreerra.
Haata'u malee, hojiitti deebiin MAX 737 waan hinbeekamneef, tarkaanfiin fudhataa jirru kun itti fufuu hindanda'u,'' jedhan Maatiiw Wuud Itti aanaan Pirezidaantii Kutaa balalliinsa dheeraa Norwee.
Maamilli kana dura balaliinsaaf galamaa kamiyyuu yoo jiraate tajaajilliwwan balaliinsawwan Norwee biraatti kan ramadamu jedhameera.
Imaltoonni kan booda daandii qilleensichaa balali'u hinbarbaadne yoo jiraatan ammoo kanfalii guutuu ni deebii'aaf jedhamera.
''Nutis tajaajilawwan Osloo, Isokholmiifi Koppanhaaganitti karoorfaman akkuma duriitti kenniina,'' jedhuu Mr Wuud.
Murteen tajaajila Irlaandii- US jidduu dhaabuuf fudhatamu kunis ''filamaata dhumaati'' jedheera daandii qilleensaa kun.
Daandiin qilleensaa Norweey bara 1993tti akka tajaajila xiyyaaraa biyya keessatti kan hundeeffamee yoo ta'u, bara 2002tti gara tajaajila rakasaatti geedarame.
Gatiinsaa gadaanaanis akka saffiisaa guddatu kan isa gargaare ture yoo ta'u, wayita ammaattis daandii qilleensaa olaanaa Awurooppaatti gatii gadaanaan beekamu keessaa sadarkaa sadaffaarratti argama.
Bara darbees sararawwan haaraa 35 eegaluun imaltoota miliyoona 37 ol dadeebisuun akkasumas hojjattoota 2,000 dabalataa mindeesseera.
Keessattu naannawaaMagaalaa Niiw York tajaajiluun daandii qilleensaa Biritish, Air Kaanaadaa ykn Luftaanzaa caalaa imaltoota hedduu deddeebiisuun tajaajila qilleensaa idil addunyaa olaanaa ta'eera, akka ragaan mullisaniitti.
Haata'u malees, guddinni sun amma kisaaraa fidaa jira.
Daandiin qilleensaa kunis bara darbe paawundii miliyoona 135 kan kasaare yoo ta'u, isaafis gatii boba'aa, dorgommii cimaa fi rakkina motara Dreamliner waliin wal qabate komataniiru.
Caccabuun xiyyaara 737 Max Booyingiif maal akeeka?
4 Elba 2019
Balaa Xiyyaaraa ET302: Daqiiqaawwan 6 dhumaa xiyyaara Itoophiyaa ET302
10 Elba 2019
Balaa xiyyaara Itoophiya: Balaliistotatti miira attamii umee?
18 Bitooteessa 2019
Balaa xayyaaraa ET302: 'Paayiletoota keenyaan hedduu boonna' Daandii Xiyyaaraa Itoophiyaa